Olole nadaafadeed oo ka bilowday degmada Lafoole – Radio Muqdisho
Degmada lafoole ee Gobolka Shabelaha Hoose ayaa waxaa xiligan si habsami leh uga socda Olole nadaafadeeed oo iska kaashanayaan shacabka iyo maamulka degmadaas, iyadoo ujeedku yahay in dadku ay ilaaliyaan bilicda degaanka isla markaana ay u diyaar garoobaan roobabka xiliga guga oo hadda gobolada dalka qaar ka curtay.
Guddomiyaha degmada Lafoole Mowliid Axmed Aadan oo ay wehliyaan Taliyaha Saldhiga booliska ee degmadaas iyo xubno kale oo ka tirsan saraakiisha Maamulka waxaa ay kormeeer ku tegeen dhowr goobood oo ka tirsan meelaha howlaha nadaafaddu ay ka socdaan, waxaana ay ku dhiiri galiyeen shaqaalaha ololaha nadaafadda wada inay sii dar dargeliyaan howsha ay ku guda jiraan.
Guddoomiyaha ayaa waxaa uu sheegay in ololahaan ay maalmahaan socdeen ujeedkuna yahay in bilicda la soo celiyo, waxaana uu shacabka ugu baaqay in ay ka wada qayb qaataan ololaha Nadaafadda.
Mowliid Axmed Aadan digniin u jeediyay dadka iska leh goobaha laga cunteeyo iyo meherada kale ee ka dhisan aga gaarka waddooyinka in ay qashinka ku soo daadiyaan jidka, iyadoo ciddi lagu arka falkaasi laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.
Guddoomiyaha Lafoole ayaa waxaa uu sidoo kale booqasho ugu tagay maamulka wakaaladda biyaha degaanka Ceeelasha biyaha oo iyagu u soo gudbiyay cabasho, si arrimahaasi wax looga qabto.
Wasiir ku-xigeenka Amniga Gudaha: “Ciidamada amniga gacan halagu siiyo ka hortagga qatarta miinada”